मिथीलाले भनिन, – वुढेसकालमा पनि एक्लै वस्ने ?-Nagarikaawaj.com
मिथीलाले भनिन, – वुढेसकालमा पनि एक्लै वस्ने ?
बुटवल । रंगमञ्च र चलचित्रमा क्यौंपटक बिहे भइसकेको छ उनको । चर्चित अभिनेत्री, नृत्यांगना र नृत्य शिÔिका मिथिला शर्मा वास्तविक जीवनमा अविवाहित नै थिइन् । अव भने उनि अविवाहीत मात्रै रहनेछैनिन । उनी चाडैनै दाम्पत्य जीवनमा बा“धि“ने खवरले यतिवेला मिडीया तताईरहेको छ । ५० वर्ष पनि पुगिसकेकी उनका हुनेवाला पति को होलान् त ? कुनै कलाकार, उद्योगी व्यापारी, व्यवसायी, पेसाकर्मी । प्रश्नले खुलदुली जगाउ“छ । तर, ती भाग्यमानी अरु कोही हैनन । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरासँग यतिका वर्षपछि लगन गाठोँमा कसीन थालेकी चर्चित कलाकार शर्मालाई यो उमेरमा आएर विवाहको रहर किन जागेको होला ? धेरै फ्यानहरुले यसै सोधेका छन् ।
शर्माले कुराकानीमा उमेरहुँदा भन्दा उमेर गएपछि जिवसाथीको आवश्यकता हुने भएकाले समयले विवाह वन्धनमा वाध्न थालेको बताईन् । उनले भनिन, –‘किन विवाहक, कसरी के का लागी भन्ने कुरा हुदैन, खासमा आगामी जिवलाई सहि तरीकाले अगाडी वढाउनको लागी विवाह गर्न थालेकि हुन । चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर अनुशासीत भई काम गरेकी शर्माको यो शैलीलाई चलचित्र क्षेत्रमा प्रेरणाको श्रोतको रुपमा समेत लिएका छन चलचित्रकर्मीहरुले ।
किन वुढेसकालमा विवाह गर्न थाल्नुभएको हो ?, प्रश्न भुईमा खस्न नपाउदै शर्माले उत्तर पर्काईहालिन्, –‘वुढेसकालमा पनि एक्लै वस्ने, जिवसाथीको सहाराको लागी विवाह गर्दैछु ।’
उनको भाव त्यत्तीकै वोल्थ्यो । उमेर छँदा भन्दा गएपछिका लागी जिवन साथीको आवश्यकता पर्छ । अन्तरवार्ताका लागी शर्मासँग कुराकानी गर्ने अधिक समय थिएन । कारण उनि पढाउदै थिईन । केही समयको कुराकानीमा शर्माले विवाह समय आएपछि हुने र गर्नुपर्ने तर्क राखिन् ।
७४ वर्षिय वोहरासँग वैवाहिक जिवनमा वाधिन थालेकी मिथीला वैवाहिक जिवनमा वाधिन थालेपछि निकैनै खुसी भएकी छिन् । उनिहरुको बिहेको तिथिचाहि“ अझै टुंगो लागिसकेको छैन । दुई दशकयता नृत्य शिÔिकाका रुपमा समेत क्रियाशील शर्मा वोहराको नजरमा परिन् या वोहरा उनको नजरमा परे । त्यो स्पष्ट रुपमा भन्न चाहिनन् शर्माले । तरपनि सचांरमाध्यममा आएका समाचार अनुसार बोहरासँगको चिनजान अहिलेदेखीको हैन धेरै पुरानो छ सम्वन्ध । अजैपनि मिडीयामा खुलेरै नवोलेकी शर्माको विवाह प्रसगंको समाचारले यतिवेला सचांरमाध्यम निकै तताएको छ । उनिहरुको सम्वन्ध र चिनारी पुरानो भएपनि त्यसरी प्रेम प्रसगं चाहि हैन भन्छिन् अभिनेत्री शर्मा ।